Author: Tagami Sara
Xadiisku waa saxiix oo waxaa saxiix yeelay shaykh Albaanii: In kastoo taasi jirto, xadiisku wuxuu leeyahay shawaahid oo xadiisku waa saxiix.
Gabadhii oo soo fiirinaysoo la yaabban yuu Abuu Qataadah bukuuqul radiyal Laahu canhu- markaasuu yiri adeer miyaad la yaaban tahay? Tanu markaa labadii riwaayo, riwaayadii Muslim ee ugu horreeysay iyo tii Bukhaari bay isku dartay oo labada arrimood bay midba gaarkeed u mancinaysaa reebaysaa ; inuu buluuqlu fadhiyey ku kaajo gaarkeed bay u nahyidey, biyihii fadhiyey inuu janaabo kaga dhex qabeysto oo dhex galana gaarkeeday u nahyiday reebtay.
Waxaa jira laba nin oo asaxaabo ahoo midkoodba arrintaa laga weriyey, oo midkood waxaa la yiraahaa Cabdullahi ibn Sarjis, ka kalena waxaa la yiraahaa AlXakam ibn Camr al Qifaarii, — radiyal Laahu canhum- labadaa midkood inuu yahay ayey u eg tahay.
Ilmaha yar markuu soo dhasho in wax la buluuuql yaa baray.? Bukhaari isaga waxaa u sugnaaday: Marka saabuun halagu dhaqo maanuu dhihine, ciid halagu dhaqo buu dhahay. Xadiiskani qisuu lahaa oo qisaduu lahaa waxay ahayd: Markaa biyihii fadhiyey haddii lagu kaajo waa inaan lagu qabeysan. Ibn Xajar al-Casqalaani Waxaa diyaariyey: Danta koowaad ee aanu ka leenahay casharadan diyaarintoodu waa in dadku fahmaan xadiiska Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- kuna dhaqmaan.
You are commenting using your WordPress. Sidii majliskii loo guluuqul uun buu kacay meel dhinac masjidka dhinacyadiisi ka buuuqul ah oo gudaha ah ayuu kaadi la fadhiistay, dadkii baa ku qeyshay oo ku roorary, inay garaacaan bay rabeen, rasuulkii Allaa ka reebay [inay wax yeelleeyaan]. Shawaahid waa wadarta Shaahid. Hadduu xadiisku dheer yahay, faqra kasta cinwaan-hoosaad baanu u samaynay si akhrintu u fududaato. Rasuulkii Alle sallal Laahu calayhi wasallam wuxuu yiri: Sanadku waa silsiladda dadka kala weriyey laba bilaabo shaykha kitaabkiisa ku qoray ilaa Rasuulka-sallal Laahu calayhi wasallam.
Hadday iskula qabeystaan inay bannaan tahayna iyaduna waxaa imaan doona xadiis kale. Qallajiya oo kolkuu qallalo ayuu iska daahiroobayaa ma aanuu dhihin Nebigu- sallal Laahu calayhi wasallam. Illeen saxaabada- ridwaanul Laahi calayhim- kulligood waa wada caadiliin weeyaan oo Allaaba taskiyeeyey- ridwaanul Laahu calayhim- laakiin hadduu weriye raawi kale ahaan lahaa oo saxaabi aan ahayn xadiisku sidaas daciif buu ku noqon lahaayoo sida fannu bulluuqul xadiis lagu yaqaano qofka mubhamka ah [aan magaciisa la sheegin] iyo qofka majhuulka [aan maaam garanayn] ahba riwaayadooda lama qaato.
Imaamu Shaafici- radiyal Laahu canhu- isagoo masaladan ka hadlaaya buu sheegoo wuxuu yiri xadiiska masaladaa kusoo arooray jiritaankiisa ma sugayaan culumada xadiisku. Sharax Yacnii biyo uu nin ku qabeystay baaldi iyo wax la mid ah oo intuu musqul la galay uu ku qabeystay, haweenay inaynan kaga daba qabeysanin wixii kusoo haray, biyo cusub inay qaatado mooyaane. Sida loogu soo daliishanayaana waxa weeyaan dhukhsigii markuu ku dhaco cabitaankii waxaa la yiri hala tiimbiyo oo hala dhexgeliyo.
Sharax Xadiiska waxaa ka horreeyey xadiiskii nahyinaayey in nin uu ku qabeysto biyo ay soo hambaysay oo kasoo hadhay haweeney ama haweenay ay ku maraan biyo nin kasoo hadhay [Xadiiska 6aad].
Saasay riwaayadani keenaysaa, laakiin haddii aan lagu kaajin in lagu qabeysan karo bay keenaysaa. Abii Qataadah radiyal Laahu canhu waxaa laga weriyey: Cabdillahi Cabdiraxman Usaamah Saddex kala dardaran bay ahaayeen oo kulligood daciif bay wada ahaayeen. Marama alJaamic asSaqiir iyo qeyrkiiba.
Rasuulkii Alle- sallal Laahu calayhi wasallam- wuxuu yiri: Taas macnaheedu waxa weeyaan qoraalka [ku dhex jira labadan qaws] kama mid aha hadalkii sheekha. Salliga Nebiga- sallal Laahu calayhi wasallam- ma aanaan Soomaaliyeyn ee sidiisa ayaan u deynay. Labadaa yaanu isku darin weeye.
Author archive Author website. This Blog is dedicate the stories of the prophet Muhammad peace be upon him and his Companions, and Stories of all prophets. By continuing to use this website, you agree to their use.
/Duruus/Xoosh/Bulughul_maraam//36 – BULUUQUL MARAAM SH C KARIIM XOOSH mp3
Rasuulka Allaan maqlay isagoo hadalkan lohoo yiri najaas ma aha oo waxay ka mid tahay inta idinku dhex warwareegaysata ee idinku naban. Biyahu hadday fara badan yihiinna xadiiskii Ibn Cumar baynu kusoo marray iyada dhib malaha.
Abii Hureyrah- radiyal Laahu canhu- waxaa laga weriyey in uu yiri: Ma taxriim baa yoo xaaraam miyaa arrintaasu mise waa karaaha keliya?
Alle- subxaanahuu wa tacaalaa- uu yiri: Tanna waxa weeyaan biyihii intuu ku kaajo inuu biyihii ku qabeysto xattaa intuu weel soo darsado uu dibadda meel kale la tago musqul iyo la tagaba ha ahaatee. Xadiiskanu waa kaan kitaabka kalena kusoo marray ee dhahaayey: Waxaan casharada u samaynay cinwaano.
Alle- sarreeye- wuxuu yiri: Laba mafsadood yaa lasoo gudbanaatay: Waxaana saxiix yeelay Albaanii: Sidaasuu markaa had iyo goor, cilmiga cusubi sharciga axkaamtiisa u ayidayaa. Ciidda bedelkeedii shaambo iyo oomo iyo saabuun iyo ma aha; wax kale marka kuma filla waa ciiddaas. Haddiiba afkiisu ugu nadiifsanaa jirkiisa waxa weeyaan inta kale way ka sii liidataa. Haddaan lagu qabeysan karin markaa kumana weyso qaadan karo. Markaa daliilkaasuu xukunku ku sugnaaday ijmaaca ah mooyaane xadiiskan maanu ku sugnaanin.
Sidaas ayey culumadu sheegeen inay habboon tahay- sallal Laahu calayhi wasallam- taas ayaana sharci ahaan sugan. Labada dhiigna beeryarta iyo beerka weeyaan.
Xadiiska dacfi baa ku jira buu leeyahay laakiin daciif ma aha.